Cambaarayntii Xamaas lala rabay oo dhicisawday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaCambaarayntii Xamaas lala rabay oo dhicisawday
Cambaarayntii Xamaas lala rabay oo dhicisawday
07/12/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Qaraar uu Maraykanku horkeenay Golaha loo dhan yahay Qaramada Midoobay oo lagu cambaarayn lahaa gantaalada ay Xamaas ku tuurto Israa’iil ayaa guul darraystay.
Qaraarkan waxaa ogolaaday 87 dal waxaana diiday 57 halka 33 dal ay ka aamuseen, wuxuuna sidaas ku waayay tiradii looga baahnaa ee saddex meeloodoow labo.
Ergayga Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in ay arrintan ay garab istaag u tahay “taariikh dii soo jireenka ahayd ee khaldanayd” maadaama oo Qaramada Midoobay aysan waligeed cambaarayn caynkan ah jeedin.
Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in inkastoo aan la helin saddex meeloodow labadii loo baahnaa haddana in ay tahay markii koobaad dalalku ay aqlabiyad uga soo horjeedsadaan Xamaas.
AKHRISO:- Garyaqaanka guud ee maamulka Puntland oo ka hadlay qilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka